CBD ee Xanuunka Xanuunka | CBD ugu fiican sanadka 2021
Saameynada Waxyeelada ee CBD ee Xanuunka Xanuunka
Cbd, oo loo soo gaabiyo cannabidiol, wuxuu marayaa qaddarin sare oo loo aqoonsaday inuu yahay “ka” cusub, kaas oo laga yaabo inuu daaweeyo xaalado caafimaad oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin, welwel, xanuun, iyo hurdo la’aan, si loo taxo dhowr. Waxaa lagu heli karaa qaabab badan, laga bilaabo Kareemada CBD iyo saliidaha cuntada iyo cabitaannada CBD-ga lagu daray. Laakiin run ahaantii ma shaqeysaa?
Cbd waa mid ka mid ah xeryaha ku jira dhirta Cannabis Sativa. Marijuana waxay ka timaadaa Cannabis Sativa sidoo kale, laakiin CBD ma laha qaybaha maskaxda ee tetrahydrocannabinol (THC), oo ah qaybta firfircoon ee marijuana. Labada xeryoodba waxay saamayn ku leeyihiin nidaamka endocannabinoid ee aan jidhkeena ku hayno. Nidaamkani wuxuu mas'uul ka yahay ka shaqaynta xanuunka, rabitaanka cuntada, iyo xusuusta, iyo kuwo kale.
In kasta oo aysan jirin caddeyn caafimaad oo dhab ah oo ku saabsan saameynta CBD ay ku leedahay jirka, badanaa sababta oo ah aagga cawlan ee sharciga ah oo CBD ay ku jirtay muddo dheer, waxaa jira caddeyn ah in heer daaweyn ah aad u isticmaali karto CBD xanuun joojinta.
Inkastoo aysan jirin macluumaad dadweyne oo ku saabsan tijaabooyinka caafimaad ee isticmaalka CBD si loo yareeyo xanuunka, daraasado badan ayaa muujiyey in CBD ay yareyn karto xanuunka iyo bararka, iyadoo faa iidada ay leedahay waxyeellooyin yar. Ka sokow, dadku waxay soo sheegeen in CBD ay ka yareyso welwelka iyo hurdo la’aanta, xaaladaha badiyaa ku xiran xanuun joogto ah. Iyada oo sharciyeynta CBD-hemp-hemp laga helay gobollo badan (oo aan ku jirin THC), dad badan ayaa u jeestay CBD sidii hab kale oo loogu talagalay xanuun-joojinta.
Waxaa lagu talinayaa in dadka la il daran xanuunnada dabadheeraad ah ay kala hadlaan dhakhaatiirtooda qaadashada CBD sida hab kale. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira talooyin loogu talagalay dadka doonaya inay isku dayaan CBD xanuun:
Sigaar -cabiddu ma aha habka ugu fiican: Sigaar -cabbiddu waxay dhaawici kartaa sambabbada, ka sokow, ma aha habka ugu dhaqsaha badan ee lagu helo gargaar.
Habka maamulka waa muhiim: CBD waxaa si fiican loogu qaataa tincture si loo helo saameyn deg deg ah, ama kiniin ama kaabsool jel jilicsan, si tartiib tartiib ah, sii -deyn dheeri ah.
Iibso ka -qaybiyayaal sumcad leh. Sida fiitamiinnada iyo kaabisyada kale, CBD ma maamusho FDA, sidaa darteed waxaa wanaagsan inaad ka hesho shirkad sumcad leh, sida Red Emperor CBD, oo leh agab saddexaad oo tijaabiyey oo tayo sare leh.
Ka fiican ku bilow qiyaas yar. Kadib, si tartiib ah u kordhi, ilaa aad ka hesho kaalmo aad u weyn calaamadahaaga. Raad -raac calaamadahaaga si loo go'aamiyo in CBD ay waxtar kuu leedahay sida ka -joojiye xanuun.
Qaar ka mid ah daraasadaha caafimaadku waxay muujiyeen in xitaa haddii saliidda CBD ay tahay meel guud oo badbaado leh oo asal ahaan dabiici ah, saliidda CBD waxay kaloo soo saari kartaa waxyeellooyin qaarkood. Soo noqnoqoshada iyo darnaanta calaamadahaasi way kala duwanaan karaan qofba qof kale. Calaamadaha waxyeellada ugu badan waxaa ka mid noqon kara:
Isbedelka rabitaanka cuntada
Dareen afka oo engegan
Saliidda CBD waxay kaloo kordhin kartaa enzymes beerka, oo ah sumadda caabuqa beerka. Dadka qaba xaaladaha beerka waxay isticmaali karaan CBD, laakiin waa inay u isticmaalaan saliidda CBD si taxaddar leh, iyadoo ay ugu wacan tahay daryeelka dhakhtar si joogto ah u samayn kara tijaabooyinka heerarka enzyme -ka beerka dhiigga.
Saliidda CBD waa in gebi ahaanba laga fogaadaa xilliga uurka iyo naas -nuujinta. A 2018 waxbarasho oo ay samaysay Akademiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Carruurta ayaa uga digtay haweenka inay iska ilaaliyaan marijuana iyo waxyaabaha kale ee xashiishadda laga soo saaro xilliga uurka sababo la xiriira khataraha ka iman kara oo saamayn kara horumarka ilmaha. In kasta oo aysan gabi ahaanba ahayn sida ay CBD wax ku darsato, CBD waxaa loo yaqaanaa inay awood u leedahay inay ka shaandhayso carqaladda mandheerta.
Haddii aad ka fekereyso inaad isticmaasho saliidda CBD si aad u daaweyso xaalad caafimaad sida xanuun, hubi inaad la hadasho bixiyahaaga daryeelka caafimaadka si aad u hubiso inay kuu tahay ikhtiyaarka kugu habboon.
Previouspost Previous:Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in CBD ay daaweyn karto kana hortagi karto Coronovirus.Nextpost Next:Sida loo isticmaalo CBD Saliid Xanuun?